Igwe eji arụ ọrụ ọtụtụ nwere njirimara nke ọsọ braking ngwa ngwa, obere olu, ịdị mfe, obere kọmpat, dị mfe iji na ndozi dị mfe. O nwere 300-600kg, 400-800kg, 500-1000kg 750-1500KG, 1T-2T, ogologo nke eriri waya nwere ike ịhazi ya dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Enwere ike iji hoist nwere ọtụtụ ọrụ na-ewu ụlọ, brik ash, ụlọ nkwakọba ihe n'ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ, ụ, ụ, ụlọ ọrụ ọ bụla, obere ụlọ ọrụ, nwere ike ime akụkụ ọ bụla nke ịkwaga, ibuli, ibubata na ibudata, ọ bụ ihe kacha mma.
KCD ụdị winch eletriki eletrik bụ ụdị winch eletriki, na -emetụta ala na ikuku, nke a na -ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ ihe owuwu, yana njiri nnukwu mmepụta, ịdị elu dị elu, arụ ọrụ siri ike na ntụkwasị obi na ihe ndị ọzọ.
Nke a winch bụ ngwa ngwa dị ka: ejiri maka ụlọ obibi, na -ebuli brik ash, gwuo ala nke ọma iburu ala, ebe nkwakọba ihe, ịzụ ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ hotelsụ, ụ, ụlọ mmepụta ihe na ebe a na -egwupụta ihe, obere ihe omumu maka akụkụ ọ bụla nke inyefe, ibuli ibu na ibudata, bụ ngwa nkwalite kacha mma kacha dị n'ime ụlọ, nke a na-ejikwa ebe niile na obere ụlọ na obere ụlọ, ụlọ dị elu iji chọọ mma, kwụnye n'ala, igwu ala na-ebu nke ọma, ọ bụ igwe nkịtị na-ebuli ọrụ na ụlọ mmepụta ihe na ụlọ nkwakọba ihe. na ndị mmadụ n'otu n'otu.
1) Ngwaahịa anyị mepụtara bụ nke kwekọrọ n'ụkpụrụ ọkọlọtọ mba.
2) Nhazi ahụ nwere ezi uche
3) Ihe ndị ahụ dị mma,
4) Ọdịdị ahụ dị elu.
5) Ọdịdị ahụ mara mma ma nha ya kọmpat
Ike gosiri (kg)）
Ogo kachasị ebuli
Ịgba Ọsọ (m/min)
Ihe na -ebu ibu (JC)
Nkọwapụta eriri waya D-6X 19-6.2 D-6X 19-5.1
Ibu ibu (n'arọ) K 100 n'arọ
Oge nzipu: Maka ngwongwo ntụpọ n'ime ụbọchị 5-10. Dị ka ọnụọgụ nke iwu ahụ si dị, oge nnyefe ga-adị n'ime ụbọchị 30-55.
Mbukota: mbupu mbupụ mbupu, ma ọ bụ ahaziri ngwugwu dị ka arịrịọ gị.
Ọkachamara ibu mbupu onye na -ebugharị.
Nsogbu nsogbu Ihe kpatara Ụzọ edozi
Moto na-ebuteghị ihe anaghị akwagharị, moto na-ebugharị ebugharị mana drum ala adịghị agagharị.
mba sonye n'ike
moto gbadara ala
Nyochaa akara na akara akara
dochie ma ọ bụ rụkwaa moto
Ụgbọ ala na-agba ọsọ na-adịghị mma mana ọ na-ada ụda
otu nkwụsị ọkụ eletrik
Gbanwee oghere breeki
Ibupu ọdịda breeki ma ọ bụ tufuo ogologo
unyi breeki ma ọ bụ akwa akwa
mgbali mmiri ọdịda
1.Clear ma dozie breeki, oghere nke wheel breeki 2. Dochie mgbali mmiri
Ịgba mpịgharị ma ọ bụ ụda na-ada ụda adịghị mma
Gear ma ọ bụ nsogbu na -ebu 2.ndị na -emelata mmanụ enweghị mmanụ 3. nchịkọta mbibi roba kwachị 4. Jikọ ma ọ bụ idozi mkpọchi ịtọghe
Dozie ngwa ngwa, mezie, dochie
Ihe mkpuchi mkpuchi nwere ọkụ eletrik 1.One otu obere sekit nwere mkpuchi 2.Mgbe nchekwa ala dị mma ma ọ bụ enweghị ezigbo njikọ 1.Nyocha ma ọ bụ dochie moto
2. Nyochaa ma ọ bụ rụzie eriri ala echekwara
Ọnọdụ okpomọkụ moto dị oke elu
Ịrụbiga ọrụ ókè
Ọrụ ugboro ugboro
Oghere nke obere breeki
Na -arụ ọrụ site na ọkọlọtọ nke JC40%
A na -ebuli ibu dị elu na nkwụsị ikuku mana ịmalitegharị nsogbu Volta ọkọnọ ike dị oke ala
Chere ike ọkọnọ voltaji nkịtị wee malite
12v na -ebuli elu
Igwe ọkụ eletrik 2000 Lb
Igwe ọkụ eletrik eletrik
Kwadoro Chain ndoli
A na -eji eriri eletriki eletrik arụ ọrụ
Jet 1.5 Ton Chain ndoli, Lever Puller, Bannon Electric Hoist, Micro Electric eriri eriri, Ntuziaka Lever Chain ndoli, Igwe ọkụ eletrik eletrik,